Hello Nepal News » डिबाला बीचैमा अर्जेन्टिनाको टोलीबाहिर : के हो कारण ?
डिबाला बीचैमा अर्जेन्टिनाको टोलीबाहिर : के हो कारण ?
अर्जेन्टिनाका युवा फरवार्ड पाउलो डिबालाले यात्रामा रहेका बेला बीचमै टोली छाडेका छन् । विश्वकप छनौटका लागि टोलीमा समावेश रहेर प्रशिक्षण गर्दै आएका उनलाई प्रशिक्षक लिओनल स्कालोनीले दोस्रो खेल खेल्ने टोलीमा राखेका छैनन् । यसअघि अर्जेन्टिनाले पहिलो खेलमामा आफ्नो घरमा पाहुना टोली इक्वेडरविरुद्ध १–० को जित निकाल्दा पनि डिबालाले खेलेका थिएनन् ।
डिबालाको फिटनेसमा समस्या देखिएपछि उनलाई सुरुआतको खेलमा नखेलाइएको प्रशिक्षक स्कालोनीले बताएका थिए । त्यसपछि डिबालाले दोस्रो खेल खेल्ने अपेक्षा गरिए पनि उनको फिटनेसमा सुधार नआएपछि टोलीमा दोस्रो खेलको नराखिएको अर्जेन्टिनी मिडियाले जनाएका छन् ।
अर्जेन्टिनाले यही बुधबार बिहान ३ बोलिभियासँग उसकै घरमा खेल्दैछ । सो खेल खेल्न बोलिभिया यात्रामा निस्केको अर्जेन्टिनी टोलीमा डिबाला समावेश छैनन् । उनी पूर्ण रूपमा फिट रहेर खेल्ने अवस्थामा नरहेपछि टोली टोली छाडेर क्लब युभेन्टस फर्किनेक्रममा रहेको बताइएको छ ।
प्रकाशित मिति २६ आश्विन २०७७, सोमबार ०९:१८